Kedu uru Ịchọpụta Nchọpụta Mmasị bara uru maka azụmahịa, karịsịa n'ihe gbasara obere ọrụ ị na-ebu?
Taa, ọtụtụ mmadụ na-azụ ahịa ha site n'iji ike dị ukwuu na ihe dị mma nke Intanet. Ọ bụ ya mere ndị na-eji mmiri ara ehi aghọwo ebe ndị kachasị ewu ewu iji mee ihe n'ịntanetị ma nweta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla ị na-achọ. Ma ugbu a, ọtụtụ n'ime ịzụrụ ihe ndị dị otú ahụ ka dị mfe karịa, ebe ndị mmadụ na-eji engines ọchụchọ iji tinye isiokwu nyocha, n'ikpeazụ, chọpụta ihe dị ha mkpa. Na ebe a na-abịa ebe SEO! Ma, olee otu esi eji ndị ahụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nnukwu ohere nke Search Engine Optimization maka azụmahịa ị na-agba ọsọ n'ọnọdụ ọnọdụ mbupu? Enwere m ike inwe nlezianya anya site na ndụmọdụ ndị a dị n'okpuru ebe a. Enwere m olileanya na ha ga-enyere ọtụtụ ndị ọrụ ụgbọ mmiri na-eme ka mmiri ghara ịba na ụwa nke asọmpi na-eme ihe ike site na mmalite. Lee ha!
Mee Nnyocha Akara nke Ọma na Long Tail Keywords
Nke mbụ, na-eme Nginike Nchọnchọ Search maka azụmahịa, a na-atụ aro gị na-eduzi nyocha ọchụchọ ziri ezi. M na-ekwu ebe a ị ga-echebara ụfọdụ okwu na nkebi ahịrịokwu, nke kachasị mma maka azụmahịa gị, nakwa yana ndị ọkachamara ga-eji nyocha ọchụchọ mgbe ị na-achọ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ. Ihe a na-eme bụ ịchọta nguzozi kachasị mma n'etiti ewu ewu na oke asọmpi na niche. Echere m na enwere ike ịchọta ọtụtụ arịrịọ ndị dị ka "macbook pro 13", kama ọ ga - abụrịrị ihe ndị dị ka "ọnụahịa kachasị mma maka red macro pro 13 retina display". Naanị buru nke ahụ n'uche mgbe ị na-ahọrọ isiokwu ziri ezi ogologo ọdụ maka mkpokọta weebụ gị.
Nwere Nchịkọta Na - edozi Maka Mmetụta Na - arụpụta
Cheta - ọdịnaya gị bụ eze. Enwetala oge gị n'ịgbalị ịmepụta ọdịnaya dị elu, nke nwere oke okwu dị ogologo. Echiche a dị nnọọ mfe - naanị ịkwesịrị inwe ọdịnaya gị dị ka ihe ọmụma (ịgụ - bara uru) maka ndị ọbịa ahụ ka o kwere mee. Na-eme nke a, nweere onwe gị ịbanye na ebe nrụọrụ weebụ gị dị iche iche dịka vidiyo YouTube. Nke ahụ ga-enye ndị ọbịa gị otu ndụmọdụ ọma, ntụziaka, ma ọ bụ nkọwapụta ngwaahịa na nduzi, na-eduga ná nsonaazụ ahịa gị dị elu. N'otu oge ahụ, na-agbaso ihe ịchọ mma ọdịnaya gị, karịsịa site n'echiche nke engines ọchụchọ. N'ịme nke a, echefula na ị ga-achọ ka ndị na-achọgharị crawlers na-enyocha gị, mee ka ha dịkwuo mma, wee nata elu na nchọta ọchụchọ Google. Nke ahụ bụ ụzọ ziri ezi iji zụọ ahịa ịntanetị, ebe ọ bụla n'ụwa.
Ọrụ Kwesịrị Ekwesị maka Njikọ Ụlọ
Otu n'ime akụkụ ndị kachasị mkpa nke Nchọpụta Nchọpụta Mmasị maka azụmahịa bụ usoro ụlọ njikọ. Ọ pụtara na ị ga-enwe ụdị azụlinks dị mma jikọtara ebe nrụọrụ weebụ gị na isi ihe ndị ọzọ dị n'ịntanetị iji nweta nleta ndị ọzọ, nke mere na-eme ka okporo ụzọ gị dịkwuo elu, na-ebuli ọnọdụ gị ugbu a na nsonaazụ ọchụchọ Google, ma na-enye nnukwu ndị na-azụliteghị ndị ahịa, nke nwere ike ịbụ ghọọ ndị dị adị. Ejila aka na-eme posts na forums, na-adịbeghị anya uploaded YouTube vidiyo, na dị iche iche na mgbasa ozi mgbasa ozi mmekọrịta. Ha nwere ike ịghọ ngwá ọrụ dị mma ma ọ bụrụ na ejiri ha mee ihe n'ụzọ amamihe. Ma, m na-akwado ịnye ndị ọkachamara ka ha rụọ ọrụ ndị a maka gị ma ọ dịkarịa ala na mmalite oge azụmahịa gị. Ihe ọ bụla ọrụ gị bụ, ị gaghị akwa ụta, ejiri m n'aka.
N'ikpeazụ, ezigbo uru nke Search Engine Optimization maka azụmahịa agaghị adaba na paragraf abụọ ma ọ bụ atọ Source . Mana m na-atụ anya na ntụziaka m dị mkpirikpi ga-enyere ụfọdụ ndị na-enweghị ihe ọhụụ aka, n'ihi ya, m ga-ekwu ezigbo obi ụtọ ebe a!